Fa maninona no nijanona tsy nitolona ny «The Icon»? - Wwe
Nijanona tamin'ny tolona i Sting tamin'ny 2015 taorian'ny ratra mafy teo amin'ny hatoka nahazo azy tamin'ny lalao nifanandrinana tamin'i Seth Rollins. Ny lalao dia natao ho an'ny Tompondakan'i WWE World Heavyweight Championship, ary natao tamin'ny alin'ny Tompondakan'ny Tompondakan'ny karama isaky ny mijery.
Ny ratra nahazo ny Ikona dia vokatry ny familiana herinaratra izay nahatonga ilay angano ho moana. Sting dia nanambara ny fisotroan-dronony tamin'ny tolona matihanina nandritra ny fampidirana azy tao amin'ny Hall of Fame WWE tamin'ny 2016. Avy eo nisotro ronono izy taorian'izay rehefa nanao sonia tamin'ny All Elite Wrestling tao amin'ny 2020.
Nilaza i Sting fa tsy nanome tsiny an'i Seth Rollins izy nandritra ny a hiresaka miaraka amin'i Bill Apter tao amin'ny podcast azy taorian'ny tranga:
'Lozam-pifamoivoizana fotsiny io,' hoy i Sting. 'Lazaiko aminao, Seth, tsy izy no nahatonga izany. Ny tiako holazaina dia tsy amin'ny ampahany kely na kely aza. Tsy nisy fisalasalana fa izaho io ary mandraka androany dia tsy hitako izay eritreretiko. Ny vozoko nikapoka ny lamosiko tena ratsy indroa misesy sy ilay faharoa .... Nitsangana aho ary nanohy nanohy ny lalao izahay ary nanomboka nahatsapa ho toy ny kofehy ny tongotro ary tsapako fa tsy nanao izany aho ' Tsy voafehiko ny ranjoko. '
'Matahotra aho fa raha manomboka mihazakazaka ny tady amin'izao fotoana izao aho, dia hipoaka ny lohaliko, hanapaka taolana, handrovitra ny zava-drehetra satria tsy voafehiko,' hoy hatrany i Sting. 'Ka dia niankohoka tamin'ny lafiny efatra aho, ary nanandrana namantatra izay mitranga, ary, tsy izany no izy.' (h / t Miady )
Iza no natrehin'i Sting taorian'ny nidirany tamin'ny AEW?
Sting dia nanana lalao telo hatramin'ny nanombohany ny laharana voalohany tamin'ny AEW. Nandritra ny ady telo rehetra dia niara-niasa tamin'i Darby Allin izy. Tamin'ny lalao voalohany, niatrika an'i Brian Cage sy Ricky Starks izy mirahalahy. Manaraka izany, niatrika ny Ethan Page sy ny Scorpio Sky izy ireo. Vao tsy ela akory izay dia resin'izy ireo i Jeff Parker sy Matt Lee.
tokony hijanona amin'ity quiz-n'ny fifandraisana ity ve aho?
. @Sting dia TSY MISY! Fahafatesana maingoka indroa aorian'ny fandalinana ny latabatra.
Ampifanaraho @tntdrama IZAO hijery #AEWDynamite LIVE! pic.twitter.com/MkmQxAshLq
- All Elite Wrestling (@AEW) 19 aogositra 2021
Ny Stinger dia nanjary vatana ary nibontsina tamin'ny lalao, ka ny ankamaroan'ny fiatraikany dia ny herim-baomba mahery vaika izay mety hisy fiatraikany amin'ny hatoka sy ny hazondamosiko. Mbola ho hita eo raha hanana lalao tokana i Sting. Amin'izao fotoana izao, mahafinaritra fotsiny ny mahita ny The Icon manao ny zavatra indray mandeha indray.
ny fomba hanehoana anao toa olona
inona avy ireo zavatra mahaliana azo resahina
ahoana no hahalalanao raha milalao fitia ianao
inona no dikan'ny hoe miadana?